Beverly Little | Fifamoivoizana hiara-miasa
Sakafo manontolo 5% Averina
Toeram-pisakafoanana, tobin-tsolika ary fivarotam-panafody 2% Averina
Fitaovana sy famerenana 1% Averina
Tsy misy sarany isan-taona
Tsy misy sarany fifanakalozana avy any ivelany
by Beverly Little on Jolay 21, 2021
Dropshipping & Shopify: Edisiôna 2021 - Torolàlana iray isaky ny dingana ho an'ny vao manomboka amin'ny fomba hanombohana ny orinasanao ara-barotra sy hahazoam-bola an-tserasera (Boky sy bokim-boky momba ny fahalalahana ara-bola tsara indrindra)
09/23/2021 10:45 hariva GMT
Ny tombony azo amin'ny dokam-barotra mpiara-miasa dia miharihary ankehitriny kokoa noho ny tamin'ny lasa. Ity dia iray amin'ireo singa voalohany hanintonana ny programa dokambarotra sy ny marketing eo anelanelan'ny manam-pahaizana amin'ny marketing an-jatony.
Ny ankamaroan'ny teknolojia maoderina an-tserasera amin'izao fotoana izao dia nanamora ny fahazoan'ny mpivarotra an-tserasera mpiara-miasa ny angon-drakitra ary koa ny tarehimarika amin'ny vola miditra amin'ny varotra iraisana. Azo atao izao ny mampiasa orinasa toa ny PayPal mba hipetrahana ary koa ny fikirakirana ny faktiora. Tena nanapaka ny fotoana ilain'ny mpivarotra an-tserasera mpiara-miasa amin'ny fiandrasana ny fandoavam-bola azony amin'ireo mpivarotra.
Na ny mpiara-miasa na ny mpivarotra dia samy efa nahatsapa fa ny dokam-barotra mpiara-miasa dia miasa ho azy roa. Ireo mpivarotra dia mihevitra ny dokam-barotra sy ny marketing ho toy ny vintana hamidy ny entany amin'ny vidiny kely indrindra. Amin'ny lafiny iray hafa, ireo mpiara-miasa dia mahita fa ny dokam-barotra sy ny varotra dia fomba iray mivantana ahazoana vola amin'ny internet amin'ny alàlan'ny fanaovana zavatra izay tian'izy ireo indrindra, dia ny fandefasana amin'ny Internet.
Toy ny fampiakarana ny dokam-barotra mpiara-miasa sy ny marketing amin'ny fampiasana tafahoatra loatra, dia toy izany koa ny fanantenan'ny isam-batan'olona nanova ny marina momba ny dokam-barotra sy ny marketing. Ny dokam-barotra miaraka dia tsy heverina ho fomba fanampiny amin'ny dokam-barotra ataon'ireo mpivarotra, na ho loharanom-bola fanampiny azon'ny mpivarotra an-tserasera mpiara-miasa aminy. Ho an'ny mpiara-miasa na koa ny mpivarotra, ny dokambarotra mpiara-miasa dia raisina ho toy ny loharanom-bola lehibe ahazoana vola ary koa karama.
Izahay izao dia mitaky ny hijerena izay karazana dokam-barotra mpiara-miasa miasa tsara indrindra amin'ny karazana olona tsirairay? Misy karazana fanavahana amin'ny programa dokam-barotra miaraka?
Misy tokoa ny laharam-pahamehana dokam-barotra, ary ireo karazany koa dia miankina amin'ny fomba ahalalanao azy ireo. Ny sokajy manan-danja amin'ny programa dokam-barotra sy marketing dia mirotsaka an-tsokosoko 2: pay-per-click (PPC), ary koa pay-per-performance (PPP).
Pay Per Click (PPC) - Ny PPC no karazana dokambarotra iraisana indrindra amin'ireo mpiara-miasa amin'ny tranokala kely, ary koa ny fomba tsotra indrindra ahafahan'izy ireo mahazo vola. Amin'ity karazana dokam-barotra mpiara-miasa aminy ity dia mandoa ny mpiara-miasa aminy ny mpivarotra isaky ny mitsidika azy ny mpitsidika tranokala iray tranonkala, izany dia isaky ny misy olona mikitika amin'ny alalàn'ny mpivarotra na doka momba ny hafatra.
Pay Per Performance (PPP) - Ny dokambarotra mpiara-miasa amin'ny PPP dia voahomby tsara eo amin'ireo mpivarotra ary koa ny karazany mahafaly indrindra ho an'ireo mpiara-miasa. Amin'ity karazana programa mpiara-miasa ity dia mandoa ny mpiara-miasa ny mpivarotra raha vao miovaova ho lasa hetsika iray ny tolo-keviny - isaky ny mitsidika ny tranokalan'ny mpivarotra izy na tsia rehefa mitarika ny mpitsidika ny tranonkala. Etsy ankilany, ity karazana doka ity dia miafara amin'ny fahafaham-po indrindra amin'ny mpiara-miasa, satria ny fandoavam-bola amin'ny dokam-barotra sy ny marketing PPP dia mahazatra amin'ny 15% ka hatramin'ny 20% amin'ny tena varotra.
Ny dokam-barotra mpiara-miasa isaky ny fampisehoana dia azo fantarina tsara hatrany amin'ny karazany roa: ny karama isaky ny varotra (PPS) ary koa ny karama-per-lead (PPL). Samy malaza be ireo.
a) Pay Per Sale (PPS) - Amin'ny dokambarotra mpiara-miasa isan-karama, mandoa vola amin'ny mpiara-miasa aminy ny mpivarotra isaky ny mitsidika ny tranokalan'ny mpivarotra izy raha ny marina nahazo zavatra avy amin'ny tranokalan'ny mpivarotra. Ny mpiara-miasa dia matetika aloa amin'ny onitra, na dia mpivarotra hafa isan-karazany aza dia manapa-kevitra ny handoa sarany izay namboarina. Tsy misy olana ny fototry ny fiampangana, matetika dia lehibe kokoa noho ny vola aloa amin'ny mpiara-miasa amin'ny programa mpiara-miasa amin'ny karama-per-click.
Amin'ity karazana dokam-barotra mpiara-miasa ity dia omena vola ny mpiara-miasa isaky ny mitsidika ny tranokalan'ny mpivarotra ny karazana fampiharana na karazana karazany mitovy aminy mifandraika amin'ny fandaminana ny orinasa. Ankoatra ireo karazana dokam-barotra sy marketing marketing 3 manokana ireo dia misy karazana dokam-barotra isan-karazany hafa. Raha mifototra amin'ny halalin'ny tambajotram-pifandraisana ilay sokajy, dia azo fantarina ho toy ny ambaratonga tokana, ambaratonga roa, ary koa dokam-barotra sy varotra mpiara-miasa marobe.
Single-Tier, Two-Tier, ary koa Multi-Tier Affiliate Marketing
Ireo karazana doka sy varotra mpiara-miasa dia miankina amin'ny ambaratonga na sarany isan-karazany amin'ny tambajotra mpiara-miasa izay ahazoana mandoa.
A) Tier mpitovo - Ao anaty programa dokam-barotra iraisana tokana, ny mpiara-miasa dia omena vola arakaraka ny varotra mahitsy na tranonkala fifamoivoizana efa nofaritany ny mpivarotra. Ny karazana dokam-barotra sy varotra mpiara-miasa rehetra (izany hoe PPS, PPL, ary koa ny PPC) dia nanondro ny fatiantoka ambany sokajy tokana.
B) Roa Tier - Ao anatin'ny programa dokam-barotra misy laharam-pahamehana roa, ireo mpiara-miasa dia tsy laniana amin'ny fivezivezena mivantana na fivarotana atolony ny tranokalan'ny mpivarotra ihany, na izany aza amin'ny fifamoivoizana na fivarotana an-tranonkala rehetra natolotry ny mpiara-miasa hafa isan-karazany izay nanao sonia. amin'ny maha sub-Affiliate an'ny mpivarotra an-tserasera etsy ambony.
C) Multi Tier - Miasa sahala amin'izany ihany koa ny dokam-barotra mpiara-miasa marobe, na dia mahazo tambiny fanampiny aza ilay mpiara-miasa ho an'ny karazana mpiara-miasa marobe amin'ny taha isan-karazany amin'ny tambajotra mpiara-miasa.
D) Marketing marketing Affiliate fidiram-bola - Amin'ity karazana ity, ankoatry ny karama mpiara-miasa ny vola isaky ny mpanjifa nofaritany ny tranokalan'ny mpivarotra dia omena vola fanampiny ilay mpiara-miasa isaky ny miverina amin'ny tranokalan'ny mpivarotra izy ary koa mahazo zavatra iray hafa. Ny tambin-karama amin'izany karazana dokam-barotra izany dia miankina amin'ny isan-jaton'ny varotra na miankina amin'ny fitandremana andraikitra.
Ny mpivarotra an-tserasera rehetra dia mahita fa ireo fomba fanaovana dokam-barotra isan-karazany ireo dia mihetsika amin'ny fomba samihafa ho an'ny tsirairay amin'izy ireo. Ny dokam-barotra mpiara-miasa marobe, izay antsoina koa hoe Multi-Level Marketing (MLM) dia karazana doka amin'ny Internet ary tsy mandeha amin'ny olona rehetra koa. Raha ny marina, manam-pahaizana momba ny varotra marobe marobe no mihevitra ny MLM ho voarara na zavatra tsy ilaina.
Ny mpivarotra an-tserasera dia mila manandrana amin'ny fomba isan-karazany ary koa mamaritra izay mety hahomby indrindra ho azy. Izy dia tsy maintsy aorian'izany dia mifantoka amin'ireo teknikan'ny dokam-barotra mpiara-miasa aminy izay mety amin'ny volavolan'ny orinasan-tserasera marketing.
Raha toa ny fampakarana ny dokam-barotra sy ny varotra mpiara-miasa raha ny marina ka lasa mahery loatra, dia toy izany koa ny fanantenan'ny olona iray no niova ho amin'ny tsara lavitra momba ny dokam-barotra sy ny marketing. Ny dokam-barotra sy ny varotra miaraka dia tsy heverina ho teknika faharoa amin'ny dokam-barotra ataon'ny mpivarotra, na ho loharanom-pahalalana fanampiny ataon'ny matihanina amin'ny marketing. Ho an'ny mpiara-miasa na koa mpivarotra, ny dokam-barotra sy ny varotra mpiara-miasa dia heverina ho loharanom-bola voalohany ary koa karama.
Etsy ankilany, ity karazana doka ity dia manome fahafaham-po indrindra ho an'ilay mpiara-miasa akaiky, satria ny tambin-karama amin'ny dokambarotra mpiara-miasa PPP dia matetika 15% ka hatramin'ny 20% amin'ny tena varotra. Ankoatr'ireo karazana doka fampielezana 3 ireo dia misy karazana dokam-barotra isan-karazany hafa.
09/23/2021 11:00 hariva GMT